စာစုတို | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 36
သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့တိမ်းရှောင်သူ (အပိုင်း – ၆) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ကျနော် အိမ်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ခွဲခွာဖူးသည့် နေ့တနေ့သည်လည်း ကျနော့်အရေပြားပေါ်တွင် အရုပ်ဆုိုးအကျည်းတန် လွန်းသည့် အမာရွတ်တခုအနေနဲ့ပဲ ဖွဲ့နွဲ့ရမည်လား…။ လှပ၍ ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းလှသော ဆေးမင်ကြောင်တခုအဖြစ် တင်စားရမည်လား မပြောတတ်ပါ။ တမနက်ခင်းတွင် အဖေနဲ့အမေက ကျနော်ကုို သပ်ရပ်စွာ ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်ပေးလျက် စက်ဘီးနောက်တွင်တင်ကာ ခေါ်ဆောင် သွားပြီး ပုသိမ်ထောင်ကြီးဘေး စစ်သားစုဆောင်းရေး မျက်နှာချင်းဆုိုင်ရှိ နေ့ခလေးထိန်းကျောင်းတွင် ကျနော်အား ထားရစ် ခဲ့ကြပါသည်။ သူတုို့ထွက်သွားတော့ ဆရာမတယောက်က ကျနော့်အား အတင်းဆွဲခေါ်ထားကာ တခါးကုို ပိတ်ပစ်လုိုက်ပါသည်။ ကျနော်ကား ဆရာမလက်ထဲမှ အတင်းရုန်းကန်ပြေးထွက်လျက် ကျောင်းရှေ့သံတုိုင်နှစ်ဖက်ကုို ဆုပ်ကုိုင်ရင်း ထောင်ကုန်း လမ်းမဘက်ကုို မျက်နှာတူရှုလျက်...
ငြိမ်းချမ်းအေး – အမှန်မြင်နိုင်ကြပါစေ
ငြိမ်းချမ်းအေး – အမှန်မြင်နိုင်ကြပါစေ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၅ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် ဘယ်လောက် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားခဲ့သလဲ ဆိုရင် “စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး” လို စစ်ဆန့်ကျင်ရေး (ဗီယက်နမ်စစ်ဆန့်ကျင်ကာလ ရေးတဲ့ သီချင်း) သီချင်းမျိုးကို တရားဝင် သီဆိုခွင့် မပြုပါဘူး။ အခွေ ထုတ်ဖို့ မပြောနဲ့ စင်ပေါ်တောင် မဆိုရပါဘူး။ ဒီလို သဘောထားတွေနဲ့ ဘယ်လို ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်မလဲ။ ကျနော်ရဲ့ တပ်မတော် ဆက်စပ် မိတ်ဆွေများ စဉ်းစားပါ။ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက် ဆိုတာတော့ လူတိုင်း ရှိကြတာချည်းပါပဲ။ ကျနော့်နဲ့ မွေးကတည်းက လည်ပင်းဖက်ပေါင်းလာတဲ့ စစ်တပ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေ ချက်ချင်းလက်ငင်း အသက်ထွက်သွားနိုင်တယ်၊ ခြေပြတ်လက်ပြတ် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကျနော်...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – အရိုးသားဆုံး နှလုံးသားရဲ့  အလှတရား
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – အရိုးသားဆုံး နှလုံးသားရဲ့  အလှတရား (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၅ ထိုင်းမှိုင်းလေးလံနေတဲ့  အသိဥာဏ် ကတော့  ၁၉၇၈-၇၉ ခုနစ်..တနှစ်နှစ်ကို ညွှန်းဆိုနေရက်….. ထိုနှစ်အချိန် ထိုကာလ နေ့ ရက်တရက်ရက် မှာ စစ်ရဟတ်ယာဉ်တစီး…. မြို့ ရဲ့  အနီးဆုံး တပ်ရင်း ၉၉ ဆီ ဆင်းသက်လာခဲ့ တာကို. အညိုရောင်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့  မြို့  လွိုင်လင် အဖို့  ထူးထူးခြားခြား သတိမထားမိခဲ့ ..၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဆင်းသက်နေကြမို့  တကူးတက ပြောစရာမရှိ တွေးစရာမရှိ……၊၊ စစ်ကားတန်းရှည် တွေ ဝင်လိုက် ထွက်သွားလိုက်……....
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – အောင်ဆန်းစိတ်ဓါတ် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၅ လောကမှာ အကောင်းနဲ့အဆုိုးဟာ ဒွန်တွဲနေတာ သဘာဝပါ။ ဘဝအခက်အခဲ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် ကုိုယ်ကျင့်သီလပျက်စီးမှုဆီ ဦးတည်သွားနုိုင်သလို လုပ်ပုိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြောင့်လည်း ကုိုယ်ကျင့်တရားဖေါက်ပြားသွားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဘဝအခက်အခဲ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့်ပင် ကြံ့ကြံ့ခံနုိုင်တဲ့ စွမ်းရည် ကာယစွမ်းအား ဉာဏစွမ်းအားတွေကုို ညှစ်ထုတ်အသုံးပြုနုိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ပေါ်ပေါက်လာစေသလုို လုပ်ပုိုင်ခွင့်အာဏာ၊ နာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြောင့် မြင့်မြတ်တဲ့ လူသားအကျိုးပြု ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကုို လုပ်ဆောင်ဖုို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိလာစေပါတယ်။ အစုိုးရအာဏာရှိသူတွေဟာ အကြီးမားဆုံး လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကုို လုပ်ဆောင်ဖုို့ အခွင့်အလမ်းရှိကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှိသူတော်ကောင်းများအဖုို့ သန္တိသုခချမ်းသာမြတ်ဆုိုတဲ့ ခရီးဆုံးပန်းတုိုင်ကုို သွားရောက်ရန် လူ့ဘဝကုို အသုံးပြုစရာ ယာဉ်တခုအဖြစ်သာ သဘောထားကြပါတယ်။ ယခုရရှိထားတဲ့ လူ့ဘဝဆုိုတာ...
သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့ တိမ်းရှောင်သူ (အပိုင်း – ၅) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၅ ကျနော် ၅ တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးသည့် နှစ်တွင်တော့ အနော်မာမြစ်တဖက်ကမ်းကုို လှမ်းမျှော်ရည်စူး၍ အဖေနဲ့အမေက ကျနော်တုို့ တခြံကျော်ရှိ တုိုက်ကြီးကျောင်းမှာ ကုိုရင်ဝတ်ပေးပါသည်။ ထုိုစဉ်က ကျနော်တုို့ ရပ်ကွက်ရွာဦးရှိ ဘုိုးဘွားအစဉ်ဆက် ကုိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခဲ့သော ကျောင်းထုိုင်ဘုန်းဘုန်းမှာ ကျောင်း ဝန်းကျယ်ကြီးတခုလုံး တပါးတည်း အုပ်စုိုးခြယ်လှယ် သီတင်းသုံးနေထုိုင်လေရာ ကျောင်းကြီးပေါ် မောင်မဆော့ပေမယ့် အလှူပြီးသည့်ညမှာပဲ ကျနော်ကုိုရင်အား လက်ခံစောင့်ရှောက်မည့်သူမရှိသဖြင့် တခြံကျော်ရှိ ကုိုယ့်အိမ်ကုိုယ်ပြန်ကာ သီ တင်းသုံးနေထုိုင်ရပါသည်။ အဖေရယ် အမေရယ် အိမ်ရယ်နဲ့ ကျနာ် တခါမှ ခွဲမအိပ်စဖူး.. အိမ်ရှေ့ခန်းက သီးသန့်ခင်းကျင်းပေးထားသည့်အိပ်ရာပေါ်က သင်္ကန်းနံ့ စူစူးပေါ် လူးလိမ့်လုို့ ကြမ်းတပြေးကြီးပေါ်မှာ...
ကျော်သူ – လမ်း (နာရေးကူညီမှုအသင်း) ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၅ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအား သပိတ်မှောက်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြနေသည့် ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်းအဖွဲ့ကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ် (မြင်းခြံ၊ တောင်သာ၊ ပုပ္ပါး၊ ကျောက်ပန်းတောင်း) ခရီးစဉ်တွေကို ကျွန်တော်လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်က ရေးသားခဲ့တဲ့ “ငယ်စဉ်ကြီး လိုက်” ဆိုတဲ့ ကဗျာစာသားတွေကို အမှတ်ရနေခဲ့တဲ့အတွက် ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ယင်းကဗျာစု လေး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က – (၁) လူသားချင်းစာနာထောက်ထားစေလိုသော စိတ်။ (၂) ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးအား လက်ကိုင်ပြုလိုသော စိတ်။ (၃) စည်းလုံးခြင်း အင်အားစုကြီးဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသော ကမ္ဘာ့ရွာကြီး တည်ဆောက်စေလိုသော စိတ်။ (၄) လူမျိုးဘာသာ အဆင့်အတန်း ပညာအရည်အချင်း မခွဲခြားစေလိုသော စိတ်ဓါတ်များ ရှင်သန်...
နေဝန်းနီ(မန္တလေး) – “မန္တ လေး က စကား” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ ကျွန် တော် တို့ငယ် စဉ် တုန်းကတည်းက အဖိုး အဖွား အ ဖေ၊ အ မေ တွေ ပြောဆို နေကြတယ် စကား လေးတစ် ခွန်းရှိတယ် ။ထိုစကား လေးကိုယ နေ့တိုင် သုံးစွဲ နေကြဆဲ ပါပဲ။ “ရန် ကုန် က အကြွား မော် လမြိုင် က အစား မန္တ လေး...
သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့ တိမ်းရှောင်သူ (အပိုင်း -၄) (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၅ ညနေစောင်းပြီဆုိုလျှင် ကျနော်တုို့အိမ်အပေါ်ထပ် ဝရန်တာလေးမှ မြင်ခွင့်ရသည့် မြင်ကွင်းတခု ရှိခဲ့ပါသည်။ ပျံလွှားငှက်ဟု ကျနော်ထင်မြင်သော ငှက်ကလေးများအုပ်စုနှင့် မျိုးချစ်မျက်ကန်း ကျီးကန်းများ တအုပ်စုနဲ့တအုပ်စု ထုိုးဆိတ်သတ်ဖြတ်သော ငှက်တုိုက်ပွဲဖြစ်ပါသည်။ ညနေရောက်တုိုင်း သူတုို့ တအုပ်စုနဲ့ တအုပ်စု ထုိုးဆိတ်သတ်ဖြတ်ကြပါသည်။ သူတုို့တကုိုယ်စာ သူတုို့ငှက်မျိုးနွယ်စု တစုစာ အတောင်ပံများ ပျံသန်းရန်အလုို့ငှာ သဘာဝကြီးက သဘောထားကြီးကြီး ကျယ်ပြန့်ပေးထားသော ကောင်းကင်ပြာကြီးသည် ထုိုငှက်အုပ်စုများ၏ အတောင်ပံများ အပျင်းဆန့်ရန်အတွက်မူ ကျဉ်းလွန်းလှသည် ထင်ပါသည်။ ငှက်များ၏ စစ်ပွဲကုို ကျနော့်က အလုိုမတူလျက် ငေးမောတွေဝေရင်း ရောက်ရှိလာသော တခုသော နွေဦးရာသီတွင်တော့ ကံကြမ္မာက ခါချဉ်ကောင်များ အသုိုက်ဖွဲ့ထားသော...
သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့တိမ်းရှောင်သူ – အပိုင်း (၃) (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ နှစ်တနှစ်အရောက်တွင်တော့ ထုိုသူ့လက်ထဲသို့ စိတ်ပုတီးတကုံး ရောက်လာပါသည်။ သူ့၏ နှုတ်ကမူ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ဘာတွေရွတ်ဆုိုနေသည် မသိ။ လဘက်ရည်ဆုိုင်ထုိုင်ရင်လည်း ထုိုပုတီးနှင့် ..။ သို့သော်လည်း သူ့နုိုင်ငံရေးသိပ္ဗံကုို စိတ်အားထက်သန်စွာဆွေးနွေးနေချိန်နှင့် ကမ္ဘာ့ရေး၊ မြန်မာ့ရေးသတင်းများအလယ် သူနစ်မြှုပ်နေချိန်များတွင်တော့ သူ့စိတ်ပု တီးသည် စားပွဲခုံအောက် သူ့ခြေထောက်နားတွင် ပြုတ်ကျလျက် …။ မြင်တွေ့သူ ကျနော်တုို့တယောက်ယောက်က ကောက် ယူကာစားပွဲပေါ်သို့ ပြန်တင်ပေးထားရတတ်ပါသည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်နေ့လယ် တနေ့ခင်း ကျနော်တုို့ညီအကုို၏တသုိုက် မျိုးကုိုတုို့အိမ်တွင် ထုိုကာလက ထွက်ခါစ ခုိုင်ထူးရဲ့ မကျေနပ်ဘူးသိလား .. သီချင်းတိတ်ခွေကုို စုဝေးနားထောင်နေခုိုက် ပုတီးတကုံးနဲ့ သူရောက်ရှိလာကာ နေရာလွတ် ခုံတန်း...
သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့တိမ်းရှောင်သူ (အပိုင်း ၂) (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၅ ထုိုသူသည် မနက်လင်းသည်နှင့် ကျနော်တုို့ အိမ်ရှေ့ရှိ ဦးကျင်သိန်းလဘက်ရည်ဆုိုင်လေးသုို့ ရေနွေးကြိုပြင်ဆင်တုန်းမှာပင် ထုိုနေ့၏ ပထမဆုံးဖောက်သည်အဖြစ် အရင်ဦးဆုံးရောက်လာကာသတင်းစာဖတ်ဖုို့စောင့်ရင်း လဘက်ရည်သောက်မည်။ ပြီးပါက ကျနော်တုို့ အိမ်နဘေးက ဖဆပလခေတ် ပမညတအမတ်ဟောင်း အဖေကြီးဦးစိန်မောင် လမ်းလျှောက်ပြန်လာသည့် အရိပ်အယောင်ကုိုမြင်တွေ့ပါက ကျနော်တုို့အိမ်ရှိရာ လမ်းတဖက်ကမ်းသုို့ကူးလာကာ သူတုို့နှစ်ယောက် မနက်ခင်း ရေဒီယုို နားထောင်လျှင် နားထောင်၊ သုို့မဟုတ်ပါက သူညက နားထောင်ထားသော ညသိပ်သတင်းများ မနက်ခင်းသတင်းစာပါ အကြောင်းအရာများကုို အဖေကြီးဦးစိန်မောင်အား သူက ပြောဆုိုဆွေးနွေးမည်။ (ကျနော်တုို့မမွေးခင်ထဲ အတီ အတေကပင် ကျနော်မိဘများနှင့် အိမ်ချင်းကပ်နေထုိုင်ခဲ့ရာ အဖေကြီးဦးစိန်မောင်ကုို သူ့ သား များခေါ်ဝေါ်သည့်အတုိုင်း အဖေကြီးဟုခေါ်၍...
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month May 2018 (146) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
နိုလှိုင်း ● ဦးထုပ်​​တွေအ​ကြောင်း https://t.co/3FHsEfIzlx https://t.co/bYsoqRr4d8 about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ရဲ့ ပြောင်းဖူးလေ … ပြောင်းဖူး .. https://t.co/kPI2TRh7hB https://t.co/GIdYenno9d about7hours ago ReplyRetweetFavorite
ဆောင်းယွန်းလ ● ကွန်ဗီးနီးယန့်စတိုးထဲက အခိုးအငွေ့များ https://t.co/WumzYV3j9Y https://t.co/0j6Jhy9S7y about9hours ago ReplyRetweetFavorite
သန့်ဇင်စိုး ● ပြန်လည်တမ်းတခြင်း (ဝတ္ထုတို) https://t.co/s81ZcYcHcw https://t.co/qNHgWECrHQ about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စီမံကိန်းတွေ … https://t.co/PaTlGxdxWn https://t.co/lBYC5hdyQ9 about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite